Uncedo lokubeleka koomama eSpain | Ezezimali
Uncedo lokubeleka eSpain
Xa ixesha lifikile umfazi okhulelweyo Ukuthandabuza okuninzi kuvela, ngakumbi kwindawo yabo yokusebenza. Imibuzo eneempendulo kwaye kweli nqaku siza kuyityhila.
Umzekelo, ukwazi ifayile ye- Izibonelelo zokubeleka kwelicala kugxilwe kunina. Kuyinyani ukuba inkcitho yezoqoqosho ebandakanyekayo ekukhuliseni umntwana inkulu kakhulu kwaye nakuphi na ukutyhala okuvela kuRhulumente kuncinci.
Kukho iinkqubo zenkxaso ezijolise ekuncedeni ngeenkonzo ezifunwa ngumntwana ekukhuleni kwakhe kunye nokunceda umama kwinkqubo ukuba usebenza ngexesha lokukhulelwa.
E-Spain kukho iinkqubo ezibonelela ngezixhobo ezahlukeneyo kwaye kunjalo zinikezelwa simahla, oku, ukunceda ukukhuthaza Inqanaba lokuzalwa laseSpain ebincipha kule minyaka idlulileyo, urhulumente ubonelela ngoncedo lwezezimali oluninzi kunye nokuncitshiswa kokuzalwa komntwana.
1 Uncedo lokuya kubeleka kunyana wethu
2 Uncedo lokubeleka lokuzalwa okanye lokukhulisa umntwana.
3 Uncedo lokhathalelo lokugcina umntwana ngeenjongo zokwamkelwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu abangabodwa
4 Nceda iintsapho ezinkulu.
5 Ukuncitshiswa kwerhafu yengeniso yomntu.
6 Isibonelelo sokubeleka.
7 Umhlala phantsi wokumitha.
9 Uhlawuliswa malini
Uncedo lokuya kubeleka kunyana wethu
Kule meko, omnye wabazali bomntwana angafaka isicelo soncedo, intlawulo enye ibalwa kuthathelwa ingqalelo umvuzo wobungcali wabazali kulo nyaka ukhoyo (okwangoku owona mvuzo usezantsi eSpain ngama-735.90 euros) kunye nenani labantwana okanye abantwana abamkelweyo kuxhomekeke kwimeko.
Ukuba banayo abantwana ababini umvuzo ophantsi wobuchule uphinda-phindwe kane, ukuba banayo abantwana abathathu umvuzo ophantsi uphinda-phindwe kasibhozo kwaye ukuba unabantwana abane okanye nangaphezulu umvuzo ophantsi uphinda-phindwe kabini.
Kwimeko apho omnye wabantwana wabanengxaki ye- ukukhubazeka okulinganayo okanye okungaphezulu kwama-33%, kabini kufuneka kubalwe.
Olu ncedo sele lukhankanyiwe luyahambelana ne izibonelelo zokuzalwa komntwana okanye zokufumana umntwana kwiintsapho ezinkulu, oomama abakhubazekileyo kunye nabazali abangabodwa, ipenshini yenkedama, isibonelelo sokubeleka ngokukhethekileyo xa uzala, phakathi kwabanye.
Uncedo lokubeleka lokuzalwa okanye lokukhulisa umntwana.
Xa iintsapho zingadluli kwimida ethile kwaye ezinye zeemeko ezilandelayo zihlangabezana nazo, Izibonelelo zoKhuseleko lweNtlalo zoncedo lwe-1.000 euro ngentlawulo enye:
Abantwana abazelwe okanye abamkelwe kusapho lomzali omnye: Oko kukuthi, olo sapho apho lwenziwe kuphela ngumzali omnye kwaye ikwangulo uhlala naye umntwana.
Abantwana abazalwe okanye bamkelwe kwiintsapho ezinkulu: Oko kukuthi, ezo ntsapho zinabantwana abaninzi kakhulu okanye ezifumana le meko ekuhambeni kwexesha.
Abantwana abazalelwe okanye bamkelwe kwiintsapho apho umama aphethwe kukukhubazeka okulingana okanye okungaphezulu kwe-65%: oku, okoko nje ukuzalwa okanye ukwamkelwa komntwana kwenzeka ngaphakathi kummandla waseSpain.
Inqaku elikhankanywe apha ngasentla ngu uxolelwe kwiRIPF (Irhafu yeNgeniso yobuqu) kwaye ngu iyahambelana nokuzalwa komntwana okanye izibonelelo zokufumana umntwana kwiintsapho ezinkulu, oomama abakhubazekileyo kunye nabazali abangabodwa, ipenshini yenkedama, isibonelelo sokubeleka ngokukhethekileyo xa uzala, phakathi kwabanye.
Uncedo lokhathalelo lokugcina umntwana ngeenjongo zokwamkelwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu abangabodwa
Olu ncedo lunikwa umntwana ngamnye okanye umntwana ongaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala, okanye ongaphumeleliyo, kubantwana abakhubazekileyo kwaye abangaphantsi okanye ngaphezulu kweminyaka eyi-18 kwintlawulo elingana okanye edlula i-65%, ephetheyo yomxhamli, kunye igcinwe ngenjongo yokwamkelwa kunye nokhathalelo lwesigxina.
Kwezi meko zimbini, iimfuno ezahlukeneyo mazifuneke nganye nganye:
Ukufumana uncedo lwezezimali ngabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala akufuneki ukuba ugqithe kumyinge wokufumana umvuzo.
Ukufumana uncedo kubantwana abakhubazekileyo, kuyakufuneka ukuba umntu ophetheyo umntwana akwazi ukuqinisekisa ukuba ukukhubazeka ngama-33%.
Nceda iintsapho ezinkulu.
Ukuze usapho lube luxhamli kolu hlobo loncedo, kufuneka lube ne isihloko esikhulu sosapho inyanzelekileyo, icacisa ukuba ikuluhlu oluqhelekileyo, ukusuka kubantwana abathathu ukuya kwabane okanye kudidi olukhethekileyo, ukusuka kubantwana abahlanu ukubheka phambili.
Olu ncedo lukhona uhlobo oluthile lokutsalwa olunokusetyenziswa kwingxelo yengeniso okanye, ufumane i-100 euros ngenyanga njengentlawulo engaphambili.
Ukuncitshiswa ngolu hlobo lulandelayo kuxhomekeke kusapho:
Ukuncitshiswa kwee-euro ezingama-1200, ngokukodwa kwiintsapho ezinkulu ngokubanzi.
I-1200 ye-euro yokuncitshiswa, ekhethekileyo kwiintsapho ezinabantwana abakhubazekileyo.
I-2400 i-euro yokuncitshiswa, ekhethekileyo kwiintsapho ezikudidi olukhethekileyo.
Kwaye ubuncinci, banoluhlu lwe urhulumente izibonelelo kunye nezaphulelo ngokukodwa njengokuhamba, amaziko enkcubeko, abasebenzi basekhaya, iifizi zemfundo, iinqwelomoya, phakathi kwabanye.
Ukuncitshiswa kwerhafu yengeniso yomntu.
Oomama abazimeleyo okanye abasebenza ngokwabo nababhalisiweyo kwiskimu esihambelana noKhuseleko lweNtlalo, banokuncitshiswa isixa semali I-1.200 euro ngonyaka ngomntwana ngamnye ongaphantsi kweminyaka emithathu ubudala kwingxelo yengeniso yokuba wazalwa okanye wamkelwa kummandla waseSpain.
Isibonelelo sokubeleka okanye isibonelelo sikatata, esisibonelelo sezoqoqosho esifunyanwa kuKhuseleko lweNtlalo luye kumsebenzi.
Akukho nto ngaphandle kwesibonelelo sokuqhubeka nokufumana umvuzo ngenxa yexesha lokuphumla lokuzalwa komntwana.
Umhlala phantsi wokumitha.
Omnye umba obaluleke kakhulu ngexesha lokuya kubeleka lixesha elinikezelwa emntwaneni ukubeleka, ngenxa yoku, oomama kufuneka bacele ikhefu lokungabikho ukuba ngumama okwethutyana ukwenzela ukuba indawo abasebenza kuyo ihlonitshwe kwaye bahlawulwe iiveki zokukhubazeka ngokuzala kunye nokhathalelo lomntwana.
Nangona ukukhulelwa, ngelixa wayesebenza kwiminyaka edlulileyo wayecalucalulwa kwaye kwanomama waphulukana nomsebenzi, namhlanje ukhuselwe kakuhle ngumthetho kwaye siza kuwuchaza lo mbandela nzulu apha ngezantsi.
Umhlala phantsi wokumitha Sisibonelelo esinikwa ngoKhuseleko lwezeNtlalontle esamkela ukumiswa emsebenzini komsebenzi wokubeleka, ukwamkelwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu ngokusemthethweni kunye nokusisigxina okanye ngokulula ukukhathalela abantwana ngaphambi komtshato.
Ukunqunyanyiswa kugubungela ixesha leeveki ezili-16 eliza konwatyelwa ngaphandle kokuphazanyiswa kwaye longezwa ezinye iiveki ezimbini ukusuka kumntwana wesibini ozelweyo, kwimeko yokuba kulaliswe esibhedlele, kwandisa ixesha eliqhubeka ukuya kwiiveki ezili-13 ngaphezulu ukuba kuyafuneka.
Ukuze ukonwabele le nzuzo, kuya kufuneka uthobele iimfuno ezimbini ezibalulekileyo:
Yiba ngaphakathi phezulu koKhuseleko lweNtlalo: Ukuba umama akabhalisanga njengomntu oqeshiweyo okanye oziqeshileyo, kukho iimeko apho oku kungazalisekiswa, njengokungaqeshwa ngokupheleleyo apho kufunyanwa isibonelelo, igalelo lomsebenzi yinkampani engaphandle kommandla wesizwe, phakathi kwezinye iimeko.
Ukwamkelwa a elona thuba liphantsi lokufaka igalelo: xa umsebenzi engaphantsi kweminyaka engama-21 ubudala, akadingi thuba lincinci, kodwa ukuba akanabo obo budala, kufuneka abephakathi kwama-21 nama-26 eminyaka ubudala kwaye abe negalelo leentsuku ezingama-90 kwisithuba seminyaka esi-7 kwaye abe ngaphezulu ngaphezulu kweminyaka engama-26 kufuneka ihlawulwe kwiintsuku ezingama-180 kwiminyaka esixhenxe.
Ukwazi ukuba umama okanye utata uza kuhlawulwa malini ngokunqunyanyiswa kokubeleka, umrholo wenyanga ephelileyo mawuthathwe njengendawo ekubhekiswa kuyo, apho ungabona khona ibhokisi ekuthiwa zii-Contingenivals eziqhelekileyo, apho loo mali yahlulwe ngeentsuku ezingama-30 inyanga kwaye zeziphi iziphumo ngumvuzo wemihla ngemihla oza kuhlawulwa. Isibonelelo sakhe esihlawulwa yi-INSS.
Ikhefu lokuya kubeleka lithatha iiveki ezili-16 ezingaphazanyiswa ngaphandle kokuba kukho iimeko ezingaqhelekanga ezifana nezi zilandelayo:
Ukusuka kumntwana wesibini, iiveki ezi-2 zokukhubazeka zibonelelwa ngexesha ngalinye lokubeleka.
Ukuba ngumntwana okhubazekileyo, kufuneka alingane okanye ngaphezulu kwe-33% ukuze iiveki ezimbini ezingaphezulu zigunyaziswe ixesha lokubeleka.
Ukuba kukuzalwa ngaphambi kwexesha okanye nayiphi na imeko evumela ukuba ulaliswe esibhedlele ixesha elide ngaphandle kwesizathu. Ukuba ukulaliswa esibhedlele kuhlala ngaphezulu kweentsuku ezisi-7, umama angacela ixesha elingaphezulu, elinokuthi lide lifike kwiiveki ezili-13 ngokuxhomekeke kwimeko. Inokwandiswa ukuya kuthi ga kwiiveki ezili-13 xa usana olusandul 'ukuzalwa lunexesha elide lokulaliswa esibhedlele kunesiqhelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Uncedo lokubeleka eSpain